Maina ny tany: mijaly rano ny toerana maro eto Analamanga | NewsMada
Maina ny tany: mijaly rano ny toerana maro eto Analamanga
Maina ny tany. Toerana maro mijaly rano eto Analamanga, efa andro maromaro izao, indrindra any Atsimondrano sy Itaosy. Mandritra ny alina, miandry rano ny mponina fa matetika tsy mahita na zara raha misy. Raha misy indray dia maloto feno fotaka. Ny ankamaroan’ny vovo, ritra daholo. Misy mifampitsinjo ihany, mifamonjy amin’ny rano, saingy tsy ampy. Ao koa ny sasany manararaotra mivarotra lafo hatramin’ny 500 Ar, 600 Ar iray daba mavo raha tokony ho 300 Ar amin’ny ankapobeny. Mponina sasany, voatery mandeha lavitra vao mahita sotroina sy andrahona sakafo.
Fijaliana goavana ny tsisy rano, rano sotroina aza tsy hita koa mainka fa ny hidiovana. Izany rehetra izany, mora miteraka aretina. Manoloana izany, nitondra vahaolana vonjimaika tamin’ny alalan’ny famatsiana rano entin’ny fiara vaventy ny minisiteran’ny Rano sy ny Jirama. Rano 10 000 m3 ary hitohy mandritra ny andro maromaro. Mitovy ny tranga eny Ampitatafika sy Alasora, hoy ny ao amin’ny Jirama. Mety atao indroa isan’andro ny famatsiana avy amin’ireo fiara vaventy ireo.
Vahaolana maharitra ny miroso amin’ny fandatsahana orana artifisialy. Feno ny fepetra nanaovana izany, jerena miaraka amin’ny minisitera ireo toerana tsy ampy rano, hatrany Andekaleka. Tsy misy hadino ireny, hoy ny ao amin’ny Jirama, fa tsy maintsy vatsiana. Hita ny orana nilatsaka teto Analamanga, omaly.
Tsy araka ny tokony ho izy ny fotoam-pahavaratra, misy fiantraikany hatrany amin’ny famatsiana herinaratra. Hita soritra izany ankehitriny amin’ny fahatapahan-jiro matetika. Asa maro no tapaka miaraka amin’izany, midika fihariana mikatso. Koa vahaolana naroson’ny maro ny hanatevenana tetibola ho amin’ny fandatsahana orana artifisialy.